२०७८ कार्तिक ६ शनिबार
अमेरिकी सेनद्वारा ड्रोन आक्रमणमा अल कायदाका नेता मारिएको दाबी
पार्टीको इज्जत लुट्ने गए बल्ल पार्टी राम्रो भयोः ओली
पहिराले मुक्तहलियाको उठिबास लाग्यो
एमाले वडा अधिवेशन उद्घाटनमा किन देखिएनन् बादल र रावल ?
एमाले सकियो भन्नेहरु बलेसीका पानीका फोका हुन् भन्दै गर्जिए ओली
आर्यन खान र अनन्या बीचको खुल्यो यस्तो गहिरो रहस्य , आर्यनले भन्छन्– के जुगाड हुन्छ हैन ? अनन्या भन्छिन्– म एरेन्ज गर्छु ।
विद्यालयबाट ३० जना बालबालिका अपहरण परे
नायिका पुजा शर्माको अभिनय रहेको ‘रमरम मरौटी ‘बोलको गीतको चौतर्फि चर्चा
कञ्चनपुरमा काटेर सुकाउन राखेको धान खेतमै उम्रियो : लागत खर्च नउठ्दा किसान निराश
काल बनेर आएको बाढीमा परि मृत्यु हुने मानिसको संख्या १११ पुग्यो,३७ जना अझै वेपत्ता
जाजरकोटमा लुकिछिपि शिकार खेल्न हिडेका नबिन र २२ बर्षिय मनोज चार नाल भरुवा बन्दुकसहित समातिए
फिल्म शुटिंगमा चलाएको गोली लागेर छायाँकारको मृत्यु, निर्देशक गंभीर घाईते
गीत हिट बनाउने गज्जबको काईदा टिकटक , साम्राज्ञीको यस गीतमा टिकटक बनाउनेले १ लाख रुपैया पाउने
नायिका साम्राज्ञीको अभिनय रहेको ‘माया पिरेम’ बोलको गीतमा टिकटक बनाउनेलाई १ लाख पुरस्कार दिइने
यस बर्ष प्रदर्शनमा नआउने भयो अमिर खानको फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’
बलिउडका मिस्टर परफेक्सनिष्ट आमिर खान ३ दशक देखी फिल्ममा सक्रिय रहेका छन् । आमिरले आफ्नो करियरमा एकदमै धेरै फिल्ममा काम गरिसकेका छन् । उनी अहिले पनि फिल्म लाईनमा सक्रिय नै रहेका छन् तर फरक यति छ कि उनी अहिले एकदमै कम फिल्महरु खेल्छन् ।
तर उनी आफ्नो फिल्मलाई एकदमै परफेक्ट बनाउनमा केन्द्रित रहने गरेका छन् । उनी आफ्नो फिल्मको शुटिंगमा कुनै कसर बाँकि छोड्दैनन् । लामो समय देखी आमिर आफ्नो फिल्म लाल सिंह चड्डामा ब्यस्त रहेका थिए । अहिले यस फिल्मको शुटिंग सकिएको छ । अब उनको यो फिल्मको रिलिज डेट समेत बाहिर आएको छ ।
यस फिल्मको रिलिज डेट यसअघि क्रिसमसमा तोकिएको थियो । अब अहिले आएर यस फिल्मको रिलिज डेट फेरिएको छ । आमिर खान प्रोडक्शनको आधिकारीक इन्ष्टाग्राम एकाउण्टमा यो फिल्मको रिलिज डेट भ्यालेनटाइन्स डे को अवसरमा हुने बताइएको छ । त्यस्तै प्रशासनद्धारा २२ अक्टोबर देखी सिनेमा घर खोल्ने घोषणाको स्वागत समेत गरिएको छ ।
‘सैईया धिरे धिरे’ बोलको गीत सार्वजनिक
आर्यन खान र अनन्या बिच यस्तो रहेछ संम्बन्ध
आखिर किन हरेक शनिबार आफ्नो कारमा कागती–खुर्सानी झुन्डाएर हिड्छिन् बिपशा बसु
‘कमब्याक’ असफल भएपछि वेब सिरिजमा ध्यान खिच्दै शिल्पा शेट्टी